ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट– रोकिएका छैनन् स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम - Engineers Post
आइबी चौधरी May 14, 2021
तीव्र गतिमा विकास निर्माणमा खटिएका स्थानीय तहमा कोरोनाले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । त्यसमाथि वैशाख, जेठ र असार भनेको नेपालका लागि विकासको चटारोको समय मानिन्छ । तर, कोरोना कहरले गर्दा स्थानीय तहमा तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तीव्र गतिमा संचालन हुन सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि स्थानीय तहमा संचालित विकास निर्माणको काम प्रभावित भए तापनि रोकिएका भने छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिनुभन्दा पहिले विकास निर्माणका करिब ३ सय योजना तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ । उक्त नगरपालिकामा पर्ने १४ वटा वडामा ५ लाखसम्मका योजनाहरू कार्यान्वयनको तयारीम रहेको सोही गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख ई. मणिप्रसाद तिवारीले इन्जियर्स पोस्टलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ अहिले १४ वटा वडाको गरेर करिब ३ सय योजना छन् ।’
ई. तिवारीका अनुसार वालिङ नपामा अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका छन् । ती प्राय ५ लाखसम्मका योजना रहेका छन् । त्यसैले उपभोक्ता समितिबाट हुने विकास निर्माणका काम चालू रहेको उनको भनाइ छ । उनले इन्जिनियर्स पोस्टलाई भने, ‘उपभोक्ताले गर्ने सामान्य काम प्राय चालू छन् तर, ठेक्काबाट हुने काम भने बन्द छ ।’
उपभोक्ताबाट हुने सामान्य काम चालू रहे पनि करिब १० ओटा जति ठेक्का सम्झौताबाट भइरहेका काम भने रोकिएको उनले बताए । अहिले कोभिडले गर्दा कार्यालय नै बन्द भएको हुनाले पनि काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।
विकास निर्माणको काम रोकिनुको अर्को कारण कामदार र निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कामदार र निर्माण सामग्री ल्याउन समस्या भएको छ ।’ उक्त नगरपालिकामा धेरै ठूलो प्रोजेक्टको काम नभएकाले करिब ७५ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेको बताउँछन्, ई. तिवारी । उनले भने, ‘वालिङ नगरपालिका विकास निर्माणका कार्य करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । अब १ महिना मात्र काम गर्न पाइयो भने सबै सम्पन्न हुने अवस्था छ । तर, कोरोनाले यो सम्भव हुन देला जस्तो छैन ।’
त्यसैगरी कोरोनाका कारण लुम्बिनी प्रदेशको अन्तिम जिल्ला बाँके निकै प्रभावित भएको क्षेत्र हो । तर, बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा भने विकास निर्माणको काम नरोकिएको बताउँछन्, उक्त गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख ई. निसार अहमद दर्जी । ‘कोभिडको महामारी बढे पनि जानकी गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काम रोकेको छैन,’ उनले इन्जिनियर्स पोस्टलाई भने, ‘ठेक्का गरिसकिएका कामको साइट हेर्नैपर्ने भएकाले काम जारी नै छ ।’
उनका अुनसार ठूल्ठूला ठेक्का सम्झौता भएका काम नरोकिए पनि उपभोक्ता समितिले गर्ने काम भने रोकिएको छ । उपभोक्ताको काम रोकिनुको कारण बताउँदै उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिबाट हुने काम सामुदायिक भएकोले मान्छेको भीडभाड हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले रोकिएको छ ।’ ठेक्काका काम दु्रत गतिमै भइरहेको बेला उपभोक्ता समितिको काम १० प्रतिशतको गतिमा मात्रै भइरहेको उनको भनाइ छ ।
जानकी गाउँपालिकाले अहिले ८ करोड लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दर्जीले दिए । ७ किलोमिटरको बाटो पीच गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार निर्माणाधीन काम लगभग सकिनै लागेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गतको सबै योजना चालू नै छन् । केही दिन निर्माण सामग्रीको समस्या थियो । जिल्ला प्रशासनले काम रोक्छ भनेर निर्णय पनि गरेको रहेछ । तर, पास लिएर काम भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार दुई/तीन यस्ता प्रोजेक्ट छन् जुन एक महिनाभित्र सक्नैपर्ने हुन्छ नत्र बजेट फ्रिज हुने सम्भावना छ । कोभिडले अचानक रोक्नुपर्यो भने यसले धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने ई. दर्जीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रदेश १ पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा विकास निर्माणका लागि सबै योजना तयारी अवस्थामा रहेको बेला कोरोना महामारी फैलिएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । तर, हाललाई फिदिम नगरपालिकामा विकास निर्माणका काम चालू रहेको बताउँछन्, सोही नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख, ई. प्रेमबहादुर काफ्ले । उनले इन्जिनियर्स पोस्टलाई भने, ‘कोभिडको संक्रमण फैलिनुअघि निर्माणका सबै काम चालू थियो । यसका लागि लागत, स्टिमेट, सम्झौतालगायत सबै योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था हो । तर, अब निषेधाज्ञाले समस्या निम्त्याउने जस्तो छ ।’
उनका अनुसार आजको दिनसम्म कामै भने रोकिएको छैन तर काममा डिस्टर्ब भने भएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिएका कारण बाहिरबाट आउने निर्माण सामग्री नआएपछि निर्माण कार्य रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा सडकको कालोपत्रे गर्ने काम चलिरहेको थियो । त्यो अहिले रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी पर्यटकीय भवन, नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन, ५ वटा वडा कार्यालय भवनलगायत १० ओटा भवन निर्माण कार्य फिदिम नपाले गर्दै थियो । कोरोनाका कारण बाहिरबाट आउने निर्माण सामग्री रोकिएका कारण निर्माण रोकिएको छ ।’
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले कोभिडभन्दा अगाडि धेरै योजना बनाएको थियो । तर, ती योजना अब के गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको कृष्णपुर नगरपालिकाका योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख ई. दीपेन्द्र कुँवरले बताए । उनले भने, ‘कृष्णपुर नगरपालिकासँग करिब ३/४ सय योजना छन् । तीमध्ये निषेधाज्ञा अगाडि ४१ ओटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन् भने उपभोक्ता समितिबाट साढे ३ सय योजना तयारी अवस्थामा छन् ।’
उनका अनुसार उपभोक्ताका करिब डेढ सय योजना सम्झौता भइसकेका छन् । ‘यिनै योजना सुरु गर्ने तयारी अवस्थामा छौं । तर, ठ्याक्कै काम सुरु गर्ने बेलामै कोरोना महामारीको आतंक फैलियो यसले सबै योजना लथालिङ्ग अवस्थामा छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ई. कुँवरले इन्जिनियर्स पोस्टलाई भने, ‘कुनै योजनामा कालोपत्रे गर्दा बेसमात्रै हालिएको, कुनैको सबबेस निर्माणको काम मात्रै सम्पन्न भएको अवस्था छ ।’
सातौं नगरसभाबाट पारित भएका योजना लगभग ९५ प्रतिशतसम्म सम्पन्न भइसकेको र गत बैशाखमा सम्पन्न आठौं नगरसभाबाट पनि थप डेढ सय जति योजना थप भएको ई. कुँवरले बताए । उनले भने, ‘यति धेरै योजना तयारी अवस्थामा भएका बेला अब यसको काम कसरी र कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा सोच्नै सकिएको छैन । अवस्था सहज नभएमा यसका लागि कुनै योजना बनाउँछौँ ।’
#कोरोना #निर्माण #विकास #स्थानीय तह
दाङमा अन्डरग्राउन्डसहित निर्माणाधीन नाचघर भत्कियो, बनेको थियो विवादित
‘स्थानीय तहमा इन्जिनियरले सब–इन्जिनियरलाई होइन, हामीले नै उहाँहरुलाई दबाब दिन्छौँ’
पुलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा इन्जिनियरलाई धम्की, डिपिआर र लागत अनुमान हराएको जानकारी !
‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक हाकिमले इन्जिनियरलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिदिए पुग्छ’
निषेधाज्ञा खुकुलो– सवारीमा जोर–बिजोर, पसल पनि बारअनुसार खोल्न पाइने
मेलम्ची र हेलम्बु बाढीको प्राविधिक अध्ययन गर्न इन्जिनियर्स एसोसिएसनले बनायो विज्ञ टोली
रुखका जरा समाएर कम्मरसम्म आएको मेलम्चीको बाढीबाट बच्न सफल एक इन्जिनियरको अनुभव
आइतबारको सेयर बजार– सबैभन्दा बढी कमाउने र गुमाउने दुवैमा हाइड्रोपावर
इन्जिनियर र विज्ञको टोलीसहित कसरी काम गर्छ, पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाले ?
स्वयम्भूमा प्रेमालाप गर्दा भेटिएका प्रमुख श्रेष्ठ र इन्जिनियरको बयान– पूजा गर्न गएका थियौँ
सेयर बजारमा खुबै चर्चा कमाएका दुई कम्पनीका जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्यायो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियरसहित ३ जनाको शव भेटियो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत ८ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरु सम्पर्कबिहीन
आइओई स्नातक तहको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रक्रिया परिमार्जन हुँदै